धोवीघाट अभियानले के कुराको संकेत गर्दछ भने एनेकपा माओवादीमा प्रचण्ड भन्ने मान्छे सबैभन्दा फोहोर हो । मलाई यो कुरा सुन्दा बडो अनौठो लाग्यो । इतिहास भन्छ, नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने काममा, नेपालमा संघीयता ल्याउने काममा, धर्म निरपेक्षताको संकल्पमा, नेपालको राजनीतिलाई समाबेशी बनाउने संकल्पमा सबैभन्दा ठूलो योगदान एनेकपा माओवादीको रहेको थियो । नेपालको इतिहासमा दशबर्षको जनयुद्धको माध्यमबाट नेपालका अशक्तहरू, आवाज नभएका आवाज बिहीनहरू, बिपन्नहरू ,परित्यक्त र बञ्चितहरूलाई दृष्टि दिएको, आफ्नो अधिकारका लागि सडकमा उतारेको एनेकपा माओवादीले हो । परिवर्तनका ऐजेण्डा सस्थागत गर्ने सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी पनि एनेकपा माओवादी कै हो । शान्ति र संविधानको कामलाई निश्कर्षमा पु-याउने काममा माओवादीले निर्णायक भूमिका खेल्छ कि खेल्दैन ? त्यसको परिणाममा एनेकपा माओवादीको भविष्य र गणतन्त्र नेपालको भविष्य पनि भर पर्छ ।
यतिबेला नेकपा माओवादीभित्रको नेतृत्व तहको क्रियाकलाप हेर्दाखेरी यो कम्युनिस्ट पार्टीजस्तो लाग्दैन । यो त कुम्भ मेला जस्तो लाग्छ । एउटा भिड जस्तो लाग्छ । दृष्टिबिहीन, दिशाबिहीन, दायित्वबिहीन र नैतिकताबिहीन जस्तो लाग्छ । नेपालको राजनीतिमा माओवादीमा अभिब्यक्त भइरहेको राजनीति अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको छ । यो माओवादीको मात्र चिन्ताको बिषय होइन । सबै नेपालीको चिन्ताको बिषय हो । हामीले पढेको र जानेको कुरा के हो भने कम्युनिस्ट पार्टी सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध हुन्छ , कम्युनिस्ट पार्टी संरचनामा बाँधिएको हुन्छ , अनुशासनमा बाँधिएको हुन्छ र संकल्पबद्ध हुन्छ ।
माओवादीमा अहिले दुईटा छ । कार्यसूचिको र कार्यविभाजनको प्रश्न छ, त्यो सँगै नेतृत्व परिवर्तन र नेतृत्व सुधारको प्रश्न छ । खासगरीकन धोवीघाटको मण्डलीले आफ्नो सबै शक्ति लगाएर प्रचण्डलाई आक्रमणको केन्द्र बनाएको छ । नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर समय सन्दर्भ महत्वपूर्ण हुन्छ , विधि प्रक्रियाको कुरो पनि हुन्छ । प्रचण्डपथको निर्माण गर्दै प्रचण्डको देवत्वकरण गरियो ।
प्रचण्डको देवत्वकरण गर्ने प्रेरणा कमरेड स्टालिनबाट आएको हो । प्रचण्डपथ एक बिम्ब थियो प्रचण्डलाई बिशाल बिम्ब बनाइयो । राजनीतिक अधिकार, सैन्य अधिकार सम्पूर्ण अधिकार प्रचण्डमा केन्द्रित गरियो । त्यो परिपाटी, त्यो परम्परा अहिलेसम्म पनि चलिआएको छ । प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा जाने अवस्थामा एक ब्यक्ति एक पद न्यायोचित कुरा हो । तर तपाइले १८, १९ बर्ष लगाएर निर्माण गरेको जुन परम्परा छ, त्यसलाई रूपान्तरणको नाममा रातारात फेर्न सक्नुहन्न । समय लाग्छ । प्रचण्डका धेरै कमजोरी छन, प्रचण्डलाई देवता मानेकोले स्वभाविकरूपमा अलिकता अभिमान हुन्छ, स्वेच्छाचारिता हुन्छ , अरुलाई नगन्ने प्रवृति हुन्छ, सामुहिक रूपमा गर्नुपर्ने निर्णय पनि ब्यक्तिगत रूपमा गर्ने प्रवृत्ति पनि पनि हुन्छ । त्यो प्रवृत्ति प्रचण्ड एक्लैले बनाएको होइन । जोजोले मिलेर प्रचण्डपथ निर्माण गरे, ती सबैले मिलेर बनाएको हो ।
अहिले शक्तिकेन्द्रिकरण, साधन श्रोतको केन्द्रिकरणको नाममा आफ्नो अध्यक्षलाई जसरी किनारा लगाएर ताछ्ने, बदनाम गराउने काम गरिएको छ त्यो त तपाईहरू सबैको अपमान हो । जसले सबैभन्दा बदनामी गर्न खोजेको हो सबैभन्दा बदनाम त्यही हो । कुनैपनि संस्थाको अध्यक्ष भनेको तपाईले रोजेको मान्छे हो । संस्थाको अध्यक्ष भनेको संस्थाको टाउको पनि हो र संस्थाको मस्तिष्क पनि हो । तपाईले जब आफ्नो टाउकोको बिरुद्ध अभियान चलाउनु हुन्छ , जब आफू धोवी भएर त्यसलाई धुने कुरा गर्नुहुन्न्छ भने कम्युनिस्ट परम्परा र कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा त्यो भन्दा लज्जाजनक कुरा केही पनि हुन सक्दैन । अहिले त्यो अध्यक्षको बिरुद्धको जो गठबन्धनको निर्माण भएको छ , त्यो सिद्धान्तको आधारमा निष्ठाको आधारमा हो भन्ने लाग्दैन ।
नेताहरू पदको लालसामा हिडेका छन । मलाई प्रधानमन्त्री चाहियो । मलाइ यो चाहियो, त्यो चाहियो त्यो त टपरेहरूले माग्ने कुरा हो । आफ्नो संस्थाको अध्यक्षको बिरुद्धमा सार्वजनिकरूपमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको सस्थापक आदरणीय नरबहादुर समेतलाई फसाएर जसरी टपरे अभियान चलाइएको छ, त्यसले कम्युनिस्ट पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टी सिद्ध गर्दैन । नेकपा माओवादी रगतमा लतपतिएर आएको पार्टी हो । माओवादीको आह्वानमा १५ ÷१६ हजार मान्छेहरूको ज्यान गएको छ । क्यान्टोन्मेन्टमा १९ हजार लडाकु, क्रान्तिको भविष्य के होला ? मेरो भविष्य के होला ? भनेर चिन्ता बोकेर बसिरहेका छन । आफन्त हराएकाहरू आफन्तको खवर पर्खेर बसिरहेका छन । तिनका आँखामा आँसु सकिएका छैनन् । १६ हजार मान्छेको बलिदान तपाईलाई प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री बनाउन होइन । दश बर्षको जनयुद्धमा मर्न र मार्न तयार भएकाहरू, नेपालको इतिहासमा चेतनाको बाढी पु-याउनेहरू किनारामा पुगेका छन । बीचमा प्रवेश गरेकाहरू मिडियामा दात देखाउँदै हिडेका छन । मन्त्री र प्रधानमन्त्री पदको निम्ति टपरी थाप्दै हिडेका छन । आफ्नो गुटको सङख्या बढाउनको लागि, संख्या प-याउनको निम्ति कोही अर्का समूहबाट आएको मान्छेलाई हैसियत भन्दा बढी ठाउँ दिनुहुँदैन । जो धरातलमा उभिन्छ उ बिनम्र हुन्छ । त्यो यथार्थवादी हुन्छ , त्यो शालिन हुन्छ , टुप्पोबाट पलाएका हरू बैशाखी टेकेर माथि पु-याएकाहरूमा बिनम्रता हुँदैन । तपाईको शिरमा धेरै ठूलो भार छ । तपाईले सबै नेपाली जनताको भाग्य अटाउने संविधान लेख्ने संकल्प गर्नुभएन भने तपाईलाई घेर्न तपाइलाई चिथोर्न कमल थापा चाहिदैन, तपाईका पार्टीका असन्तुष्ट ब्यक्तिहरू नै धेरै हुनेछन ।
अव कुरा टु¨याउछु । प्रचण्डका धेरै कमजोरी छन मलाई थाहा छ । प्रचण्ड नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा मन पर्ने मान्छे पनि हो, मन नपर्ने मान्छे पनि हो । प्रचण्डको आलोचना गर्दा मैले जतिसुकै आलोचना गरेपनि उहाँले यो सही कुरा हो भन्नुहुन्छ । प्राय उहाँले भोलिपल्ट बिर्सनुहुन्छ । यो शान्तिप्रक्रियालाई टुंगोमा पु-याउने पात्रहरूमध्ये एकमात्र र निर्बिकल्प पात्र भनेको प्रचण्ड हो । त्यसैले संविधान निर्माण भएपछि तपाई महाधिवेशन गर्नुहोस , विधिसम्मत ढंगले तपाई प्रचण्डलाई फेर्नोस, योग्य र आकांक्षीहरूलाई अध्यक्ष बनाउहोस, त्यो पार्टीको सामान्य प्रक्रिया हो ।
अहिले प्रचण्डलाई घेर्ने प्रचण्डलाई ताछ्ने, प्रचण्डको कद घटाउने र प्रचण्डलाई बदनाम गराउने भनेको शान्तिप्रक्रिया र संविधान प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने कुरा हो । जनताका जे जति ऐजेण्डा छन तिनलाई कुल्चिने कुरा हो । मेरो आफ्नो विचार सुन्नुहुन्छ भने, बन्ने भनिएको राष्ट्रिय सरकारमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको खण्डमा यो प्रक्रिया अगाडि जाला कि भन्ने मलाई झिनो आशा छ । प्रचण्ड बाहेक तपाइले जोसुकैलाई प्रधानमन्त्री बनाएपनि यो प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ । ब्यक्तिको बिम्ब , ब्यक्तिको पहिचान, ब्यक्तिको प्रतिष्ठा, ब्यक्तिको प्रभावकारिता भनेको अर्कै कुरा हो । त्यसको बिम्ब तपाई धोवीघाटमा गएर एकरातमा धोएर धुन सक्नुहुन्न । म प्रचण्डसँग बिनम्र अनुरोध गर्दछु । तपाईको पार्टीमा तपाईको बिपक्षमा बहुमत पुगेको छ भने तपाई अध्यक्ष पद छोडदिनुस । माओवादीले यो जोखिम उठाउने बेला हो । यो प्रचण्डले साहस गर्ने बेला हो । शान्ति र संविधानको पक्षमा जो प्रतिबद्ध हुन्छ त्यसलाई साथ दिने बेला हो । जो प्रतिबद्ध हुँदैन उसलाई आफ्नो बाटो जान दिने बेला हो ।
माओवादी पार्टी फुटिसकेको छ । धोवीघाटको जम्बोले माओवादी पार्टी फुटाउने गम्भीर रिहलसल ग-यो । त्यसको परिणाम हामीले भोगिसकेका छौं । तर प्रचण्डले आदर्शलाई नबिर्सने, संविधान चाहने पार्टी भित्रका र पार्टी बाहिरकालाई साथ लिएर साहस गर्नुपर्छ । जोखिम उठाउनु पर्छ । आफूले उठाएका ऐजेण्डा सस्थागत गर्न सके प्रचण्ड र नेकपा माओवादीले जो गौरव बोकेको छ त्यसको इतिहास रहला, माओवादीको इतिहास रहला, यदि उहाँले त्यो जोखिम उठाउनु भएन , साहस गर्नुभएन, यो सिनेटबाट त्यो सिनेटमा उहाँ हल्लिरहनुभयो भने माओवादीको इतिहास समाप्त हुन्छ । प्रचण्डको इतिहास समाप्त हुन्छ ।